Madaxweyne Xaaf oo si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Caabudwaaq (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xaaf oo si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Caabudwaaq (SAWIRO)
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, halkaas oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ka jirtay xiisad dagaal.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Xaaf ayaa waxaa booqashadiisa Caabudwaaq ku wehliyay ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Cabdi Carabeey iyo mas’uuliyiin kale.
Dadweyne aad u badan iyo mas’uuliyiinta magaalada Caabudwaaq ayaa wafdiga madaxweyne Xaaf halkaasi si diirran ugu soo dhaweeyay, waxaana xilliyadda soo socdo lagu wadaa in wafdigaasi ay kullamo kala duwan la qaataan waxgaradka iyo odayaasha magaaladaas.
Waa madaxweynihii ugu horeeyay oo ka tirsan maamulka Galmudug ee booqda magaalada Caabudwaaq.
Magaalada Caabudwaaq ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagneyd xiisado amni darro iyo colaado beeleed, waxayna arrintaasi keentay in beelaha qaarkood ay halkaasi ku dagaalamaan islamarkaana ay dad badan iska dilaan.